Sawiro: Wararkii ugu dambeeyey doorashada Ceelwaaq iyo Guddoomiye Geelle oo gaaray - BANAADIRSOM
Home WARARKA CAALAMKA Sawiro: Wararkii ugu dambeeyey doorashada Ceelwaaq iyo Guddoomiye Geelle oo gaaray
Sawiro: Wararkii ugu dambeeyey doorashada Ceelwaaq iyo Guddoomiye Geelle oo gaaray
Ceelwaaq (Banaadirsom) – Wafdi uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Gudiga Hirgalinta Doorashooyiinka Heer Fedraalka Muuse Geelle Yuusuf oo uu wehlinayey Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa Maanta gaaray Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
Waxaa garoonka dayuuradaha Ceelwaaq ku soo dhoweeyey masuuliyiin uu ka mid ahaa wasiirka amniga Jubbaland Jen. Dhuumaal iyo saraakiil kale
Ceelwaaq ayaa maanta waxaa bilaabaneyso doorashada lix ka mid ah 16-ka kursi ee Gobolka Gedo kuwaasoo dhamaantood laga soo wareejiyey degmada Garbahaarey.
Musharixiinta doonaysa inay u tartamaan 11-kii kursi ee dhawaan ay guddiga SEIT shaaciyeen kuwaas oo kamid ah 16-ka kursi ee deegaan doorashada 2-Aad ee Jubbaland ayaa maanta gaaray Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo halkaas oo ay shahaadada musharaxnimo ku qaadan doonan waxaana lagu wadaa in isla maantaba ay doorashada bilaabato.
Dhanka kale, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa inuu tago Ceelwaaq, waxayna warar lagu kalsoonaan karo sheegayaan in doorashada Kuraastaas ay noqon doonaan kuwa daah furan oo loogu tartamo si ka duwan kuraastii Kismaayo.
Shalay degmada Ceelwaaq waxaa ka degay laba diyaaradood oo siday Ciidamo, kuwaas oo uu hoggaaminayay Wasiirka Amniga Jubbaland Yuusuf Cismaan Dhuumaal.
Previous articleWasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya oo ka hadlay weerarkii lagu soo qaaday
Next articleCabdullaahi -Carab oo saaxiib dhow la ah Rooble oo kusoo baxay Kursigii ugu horeeyey ee doorashadiisa lagu qabtay Ceelwaaq
DEG DEG Jubbaland oo Digniin Culus U dirtay Farmaajo iyo Doorashada Gedo oo
Daawo: Taliska booliska oo soo bandhigay xogta qaraxii Liido iyo khasaaraha ka dhashay
Duqa Muqdisho oo u jawaabay Midowga Musharrixiinta